Samsung oo shaacisay 64MP cusub oo Sensor Camera Camera | Androidsis
Samsung waxay soo bandhigeysaa dareemaheeda cusub ee moobiilka oo gaaraya 64MP
Waxaan ka hadli lahayn Qalabka Samsung ee 'ISOCELL image sensor' cusub oo gaaraya 64 megapixels iyo inay isku dayi doonto inay hagaajiso tayada sawirka noocyada Exynos ee Galaxy S10. Sawir aan joojinaynin isbeddellada si aan ugu haysano taleefannada gacanta gacanteena si aan ugu qabanno muuqaal cajiib ah.
Waa si hufan waa Samsung ISOCELL Bright GW1 64 megapixel sensor taas waxaa weheliya dareemayaal kale, in kasta oo kani aanu ka badnayn 48 megapixels. Ballanqaad dhan oo ku saabsan astaanta Kuuriya ee dooneysa inay u istaagto mid ka mid ah shirkadaha tixgelinaya dareemayaasha ay ku xiran tahay kaamirooyinka.
Marka waxaan haysanaa dhinac Samsung ISOCELL Bright GW1 64 megapixel dhinaca kalena 2 megapixel ISOCELL Bright GW48. Qaar ka mid ah awooddeeda waxaa ka mid ah pixels yar yar oo ah mitirka mitirka 0,8.
Ku dheji lahjadda magaca "Bright", taas oo macnaheedu yahay dhalaal ahaan Ingiriisiga waana inuu la sameeyaa sawirkaas xaaladaha iftiinka hooseeya taas oo ah meesha ay ku dagaallamaan noocyada waaweyn ee qalabka moobiillada. Gaar ahaan isbeddelkan la siiyay "habka habeenkii" ee noocyada qaarkood sida Google, Huawei kii ugu dambeeyay ee ku soo biirayna waa Samsung.
Samsung waxay ku sheegtay warsaxaafadeedkeeda in pixels badan iyo teknoolojiyad aad u horumarsan, dareemayaal ISOCELL Bright GW1 iyo GW2 waxay la imaan doonaan heer sawir cusub inaad siiso mobiladaada soo socda horumar muuqda. Waan arki doonaa sida taasi u tarjumeyso, maaddaama kala duwanaanshaha u dhexeeya moodeellada Exynos iyo Snapdragon ee Galaxy S10 iyadoo kan labaadna waxoogaa isbeddel ah ku sameynaya duruufaha qaarkood markii shaashada laga qaadayo.
Una Samsung oo wali ku jirta dariiqa dagaalka si aysan u dhaafin meel banaan tartamayaasha tooska ah ee tooska ah waxayna sii wadaan inay muujiyaan awood, markan leh dareemayaal kamarad ISOCELL oo gurigooda ku dhashay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Samsung waxay soo bandhigeysaa dareemaheeda cusub ee moobiilka oo gaaraya 64MP
Qeyb ka mid ah APP si loo maareeyo shaashadaha Android !!